२७ फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०९:०३	0 1,099
भनिन्छ 'महिलाका बारेमा हजार मुख भएका शेषनागले पनि बयान गर्न सक्दैन ।' त्यसो त महिलाको स्वभाव, ब्यबहार र कलाका बारेमा बिभिन्न अध्ययन र सर्वेक्षण पनि नभएका होइनन तर ति सबै अध्ययन र सर्वेक्षणहरुको नतिजा फरक फरक छन् । अनौठो त के भने अधिकांश सर्वेक्षण र अध्ययनहरुमा अचम्म लाग्दा नतिजाहरु सार्वजनिक हुने गर्दछ । महिलाका बारेमा बिभिन्न धर्मगुरुहरुले पनि बिभिन्न अभिव्यक्तिहरु दिएका छन् जुन रोचक र अनौठा छन् । कतिपय अपत्यारिला लागे पनि सोच्न बाध्य पार्ने खालका छन् । आखिर जे जस्तो भए पनि महिलाबिना सृस्ती सम्भब छैन । महिला आफैमा एउटा यस्तो गुण हो जसले जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि लर्याकलुरुक पार्छ । भनिन्छ महिलाको भविष्य उसको मुहारमा केन्द्रित हुन्छ । तर पुरुषको भविष्य मिहिनेत र कर्ममा निर्भर रहन्छ । सबैमा यो नियम लागु नहोला तर अधिकांश महिला/पुरुषमा यो नियम लागु हुने बिभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ । तपाई हाम्रो छिमेकमा पनि ख्याल गर्न सकिन्छ । महिलाको रुप राम्री भएपछि जस्तोसुकै पुरुषले पनि मन पराउछन । अझ ब्यबहार पनि राम्रो भए त सुनमाथि सुगन्ध भैहाल्यो । तर पुरुषको रुप मात्रै राम्रो भएर हुदैन धन पनि चाहिन्छ । रुप नराम्रो भए पनि धन राम्रो भयो भने चाहे जस्तो राम्री युवती सहजै पाउन सकिन्छ । यसको ठिक बिपरित महिलाहरुको धन भन्दा पनि रुप राम्रो हुदा सोचे जस्तो पुरुष पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । हामीले यहाँ महिलाहरुका बारेमा यस्ता ९ वटा तथ्य प्रस्तुत गरेका छौ जुन तपाइले अहिलेसम्म सायद सुन्नु भएको छैन होला ।
२६ फाल्गुन २०७२, बुधबार ०६:३८	0 2,318
आज बिहान ६ बजेर १९ मिनेटमा सूर्य ग्रहण सुरु भएको छ । ६ बजेर २८ मिनेटमा मध्य र ७ बजेर २ मिनेटमा मोक्ष हुन्छ । बिहान ८ बजेर ६ मिनेट सम्म औशी तिथि रहेको छ । त्यसपछि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा लाग्नेछ । प्रचलित ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहण लाग्दा चन्द्रमा पुर्वभाद्रा नक्षत्र कुम्भ राशीमा भ्रमण गर्दै हुनेछ । son जसलाई आधार बनाएर फल बताउँदा पूर्वभाद्रा नक्षत्र एवम कुम्भ राशी भएका व्यक्तिहरुलाई अती कस्ट पुग्ने भन्न सकिन्छ । यस्तो समयमा कुम्भ राशीका व्यक्तिले बिशेष सचेत रहनुपर्दछ । उनीहरुले ग्रहण वार्दै दान दक्षिणा एवं इस्वर आराधना समेत गर्नुपर्छ । सुर्यग्रहण बीच सबै सुभ कार्य निषेध गरिएको हुन्छ यद्दपी हिन्दु परम्परा अनुसार भगवानको नाममा जप र दान दक्षिणा गर्नाले यो अवधिमा शुभ हुने विश्वास गरिन्छ । सुर्यग्रहणको समयमा गरिएको दान तथा मन्त्रजपले छिट्टै फाइदा गर्ने विश्वास रहेको छ ।
२५ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १०:१२	0 1,957
'सलमान खान' एउटा यस्तो नाम बन्न सफल भएको छ जुन फिल्मी जगतमा मात्रै होइन 'सेलिब्रेटी सोसाइटी'मा समेत क्रेजी नाम बन्न सफल भएको छ । उनको स्टारडमको बलिउडमा मात्रै होइन हलिउडमा समेत उत्तिकै चर्चा हुने गर्दछ । त्यसो त उनका प्रशंसक र फ्यानहरु बिश्वभर बढ्दो छ । उनलाई पछ्याउने कलाकार र फ्यानहरु थुप्रै छन् जसका कारण पनि सलमान चर्चाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका हुन् । स्मरणीय कुरा के हो भने यी सुपरस्टार सलमान खानको क्रेज त्यसै बढेका होइनन । उनको ब्रान्डीङ्का पछाडि उनले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप र उनको जीवन संघर्षले ठूलो भूमिका निभाएको छ । बाहिरबाट नियाल्दा उनको जुन व्यक्तित्व छ, उनको भित्रि रहस्य पनि त्यतिकै गर्बलायक छ । रिललाइफमा मात्रै होइन रियल लाइफमा पनि उनको संघर्ष र योगदान उतिक्कै प्रशंसनीय छ । तर कतिपय उनका भित्रि पाटोहरु भने अझै सार्वजनिक भएका छैन । जति सार्वजनिक भएका छन् त्यो पनि धेरैलाई थाहा छैन । हामीले उनको जीवनका केही भित्रि पाटो खोतल्ने प्रयास गरेका छौ । पढ्नुस् सुपरस्टार सलमानका बारेमा गोप्य रहस्य बनेका यी तथ्यहरु ।
२४ फाल्गुन २०७२, सोमबार १५:३८	0 1,016
तपाईको घरमा शान्ति भएन ? धन आर्जनमा बाधा आइरहन्छ ? परिवारको स्वास्थ्यको बिभिन्न समस्याहरु आइरहन्छ ? वा पारिवारिक सम्बन्ध सधै तनाबमय बन्छ ? यदि त्यसो हो भने ख्याल राख्नुहोस । तपाइको घरको बास्तुशास्त्र नमिलेर पनि यस्तो भएको हुन् सक्छ । केही झिना मसिना कुराहरु ख्याल नगर्दा तपाई र तपाइको परिवार सधै तनाब भोग्न बिबस बनेको पनि हुन् सक्छ । पछिल्लो समय बास्तुशास्त्र अनुसार घर बनाउने र कोठा सजाउने चलन बढ्दो छ । नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि यो चलनले राम्रो स्थान पाउन थालेको छ । यी त भए बास्तुशास्त्रका कुरा । यसका साथै केही अन्य कुराहरु पनि ख्याल राख्नु जरुरी छ । सरसर्ती हेर्दा यी कुराहरु झिना मसिना झैँ लाग्छ तर यसले परिवारको मानसिक सोचाईमा प्रतिकुल असर पारिरहेको हुन्छ । बास्तु शास्त्रले कुन समान कुन दिशामा राख्ने भन्ने जानकारी दिन्छ तर कतिपय कुराहरु यस्ता पनि हुन्छन जुन घरमा राख्नै हुदैन । यी कुराहरु घरमा राख्दा त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिको सोच्ने कोणमा प्रभाव परि त्यसको प्रत्यक्ष असार दैनिक क्रियाकलापमा पर्ने देखिन्छ । जानी राख्नुहोस् यी ६ कुरा कदापी घरमा राख्नु हुदैन
२४ फाल्गुन २०७२, सोमबार १०:४३	0 2,990
ख्यालख्यालमै खिचेको फोटो एकाएक यसरी भाइरल
२३ फाल्गुन २०७२, आईतवार १२:३६	0 711
कहिलेकाही अनौठो संयोग भै दिन्छ तपाईले ख्याल ख्यालमा खिचेको फोटोले पनि बिल्कुल नौलो पहिचान स्थापित गराई दिन्छ । कतिपय अबस्थामा त ति फोटोहरु यति महत्वपूर्ण भै दिन्छ कि त्यसको कुनै मापन नै गर्न सकिन्न । त्यसले दिने प्रतिफल अनपेक्षित भै दिन्छ । के तपाईलाई फोटो खिच्न मन लाग्दैन ? उसो भए आजै देखि एउटा प्रण गर्नुहोस । फोटो खिच्ने उत्साह जगाउनुहोस किनकी तपाईको फोटो बिश्वमै भाइरल हुन् कति पनि समय लाग्दैन । फोटो खिच्नलाई फोटोग्राफर नै बन्न जरुरी छैन । हालै एक व्यक्तिको यस्तै भएको छ । ख्याल ख्यालमै खिचेको एउटा फोटो बिश्वभर यति धेरै भाइरल बन्यो कि अहिले यो फोटो एप्पल कम्पनीले आइफोनको बिज्ञापनमा राखेको छ ।
बिचित्रका १० हिन्दु मन्दिर
२३ फाल्गुन २०७२, आईतवार १०:४३	0 2,960
हिन्दु धर्मलाई बिश्वकै पुरानो धर्मका रुपमा लिईन्छ । बिश्वव्यापीरुपमा ९ सय मिलियन भन्दा बढी जनता हिन्दु धमावलम्वी रहेको अनुमान छ । विशेषतः भारत, नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसियामा हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको संख्या उल्लेख्य रहेका छन् । तपाई हामी सबैलाई थाहै छ । नेपालमा विभिन्न कलाकौशलले भरिपूर्ण थुप्रै मठ मन्दिरहरु निर्माण गरिएका छन । त्यस ताकाको कलाकौशल अझै पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । नेपालका कुना कन्दरामा गोपालवंश, लिच्छिविकालिन, मल्लकालिन समयमा थुप्रै ऐतिहासिक कलाकौशलले भरिपूर्ण मन्दिरहरु बनाइएका छन् । नेपालमा मात्रै होइन बिश्वमा थुप्रै यस्ता मठ मन्दिरहरु रहेका छन जसले बिश्वभरका पर्यटकहरुलाई आकर्षण गरिरहेका छन । विभिन्न मुलुकमा रहेका ति मन्दिरहरु आकर्षक त छदैछ साथै भब्य र विचित्र खालका समेत छन् । पढनुहोस् बिश्वमा रहेका १० विचित्र मन्दिरहरुका वारेमा तयार पारिएको सामाग्री
२१ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १०:३१	0 4,668
मायाँ, दया, प्रेम, कोमलता र करुणाका खानी हुन्- महिला । सानो तिनो समस्यामा पनि डराउने र रुने गर्छन महिला किनकि उनीहरुको मन कोमल हुन्छ । महिलाको मन पगाल्न कति पनि समय लाग्दैन । जस्तो सुकै शत्रुको होस् आपत बिपतमा सहयोग गर्न पछि हट्दैनन् उनीहरु । पीडाले भित्रभित्रै आफु गले पनि अरुलाई साहस र प्रेरणा दिन चुक्दैनन महिलाहरु । छिन मै आकाश झार्ने, पातलै फोड्ने जस्तो रिसाए पनि एकैछिनमा मन पग्ली हाल्छ महिलाहरुको । धेरै महिलामा यो ब्यबहार लागु हुन्छ । तर सबै महिला कहा उस्तै हुन्छन र । त्यसो त कठोर मन र खुंखार अपराधी भएर पनि निस्केका हुन्छन कतिपय । केहीले अपत्यारिलो अपराध गरेको समेत फेला परेको छ । यस्ता थुप्रै अपराधहरु होलान् तर यहाँ हामीले एकदमै खुंखार अपराधमा संलग्न भनिएका ६ नेपाली युवतीको बारेमा जानकारी दिदैछौ । यी मध्ये कोहिले आफ्नै बुबाको हत्या गर्न लगाएका छन् भने कोहिले नक्कली धन्दा चलाएर प्रहरीलाई समेत ठगेका छन् । को हुन् त ४ नेपाली युवती जसले अपराध दुनियामा तहल्का मच्चाए ? पढ्नुहोस्....
२० फाल्गुन २०७२, बिहीबार १३:२२	0 1,863
विश्वका बिभिन्न देशहरुमा सेल्फीकै कारण मृत्यु भएका धेरै घटनाहरु छन् । सन् २०१५ मा सेल्फी खिच्ने क्रममा २७ को मृत्यु भएको पाइयो ।सन् २०१४ मा सेल्फी खिच्दा कम्तीमा १८ को मृत्यु भएको थियो । नेपालमा भने पहिलो पटक सेल्फीले एक युवतीको ज्यान लिएको छ । चितवनको नारायणी नदीमा सेल्फी खिच्ने क्रममा नवलपरासीको गैंडाकोट १६ बस्ने विस्मिता ज्ञवाली नदीमा डुबेर बेपत्ता भइन् । उनी सेल्फीको सोखिन थिइन त्यसैले नारायणीको उर्लदो भेललाई समेत उनले नजरअन्दाज गर्न सकिनन । उनको साथमा गएकी उनकी साथी १८ वर्षीया नम्रता सापकोटालाई भने बग्दै गरेको अवस्थामा ४० मिटर परबाट उद्दार गरिएको थियो । के तपाई पनि 'सेल्फी क्रेजी' हुनुहुन्छ ? उसो भए सेल्फी खिच्नु अघि ख्याल राख्नुस यी १३ कुरा
पूजा गर्दा यी ७ कुरा ध्यान दिए भगवान प्रसन्न
२० फाल्गुन २०७२, बिहीबार १२:३१	0 598
पूजा, पाठ , ध्यान, जप, मन्त्र उच्चारण, प्राथना आदि इत्यादि आत्म शान्त पार्ने माध्यम हुन् । धर्म पिच्छे आ-आफ्नै चलन र तरिका छन् भगवानलाई प्रसन्न पार्ने । कुनै धर्मले प्रार्थनालाई मुख्य जोड दिएका छ भने कुनै धर्ममा पशुपंक्षीको बलिलाई जोड दिएका छन् । त्यसो त भगवानका भक्तहरु आफ्नो धर्म अनुसार आफ्नो भगवानलाई प्रसन्न पार्न बिभिन्न खालका धार्मिक कामहरु गर्छन । puja हिन्दु समुदायमा बिभिन्न देवी देवताको पूजा आज्ञा गर्ने बिभिन्न बिधि बिधान रहेका छन् । प्राचिन धर्मशास्त्रहरुमा देवी देवताको पूजा गर्ने बिभिन्न तरिकाहरु उल्लेख छन् । पूजा गर्ने बेलामा यी कुराहरुको ध्यान दिन सके भगवान प्रशनन हुने मान्यता रही आएको छ जसले तपाईको मनोकामना पूरा हुनेछ । धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार पूजा गर्दा यी ७ कुरा ख्याल गर्न सके भगवान प्रसन्न हुने छन् ।
भिडियोमा हेर्नुहोस् राधिका हमालको उकुसमुकुस– “दुईटा लोग्ने राख्न किन नपाउने ?”
२० फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०७:५२	0 499
पौराणिक कालमा पाँच पाण्डपले एउटै श्रीमती द्रौपती विवाह गरेको प्रसंग हामी सवैलाई थाहा छ । अहिले पनि कहि कतै दाजुभाई सबैको एकै श्रीमती विहे गरेको समाचारहरु यदाकदा सुनिन्छ । यी त भए धेरै जनाको एउटै श्रीमती तर धेरै श्रीमतीको एउटै श्रीमान पनि नभएका भने होईनन् । पछिल्लो समय चेतना र बहुविवाहलाई कानुनी दायरामा ल्याएसँगै एक भन्दा बढी श्रीमती बिहे गर्ने चलन घटेका छन् । तर पनि यदाकदा जेठीलाई मनाएर वा छोडेर कान्छी भित्र्याउने चलन भने हटेको छैन । छोरा नभएको बहानामा होस अथवा अन्य विविध कारणले नै किन नहोस पहिलो श्रीमती हुँदा हुँदै अर्काे विहे गर्ने चलन अझै पनि छ । दुर्गम गाउँघरमा त कतिसम्म हुन्छ भने आफ्नो तर्फबाट सन्तान नभएमा वा छोरा नभएमा जेठी श्रीमती आफैले कान्छी बिहे गरि दिने अथवा बिहे गर्न स्विकृत दिने चलन पनि छ । यी त भए दुर्गम र अशिक्षित क्षेत्रका प्रसँग । यसको मतलव शिक्षित जमातमा यस्तो समस्या नभएका भने होईनन् । लभ, रोमान्स र अधिकारका नाममा डिभोर्स समेत बढ्दै छ । कतिपयले भने पुरुषले एक भन्दा बढी श्रीमती विहे गर्न हुन्छ भने महिलाले एक भन्दा बढी पुरुष राख्न किन नपाउने ? भन्ने सवाल पनि उठन थालेका छन । मुखले बोल्नु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुमा आकाश पाताल फरक हुन्छ । तै पनि सतही सवाल जवाफ गर्न मन पराउनु मानवीय स्वभाव नै हो । यहाँ लोकप्रिय गायिका राधिका हमालले पनि पाँच पाण्डपको प्रसँग कोट्याउदै दुई श्रीमान राख्न किन नपाउने ? भनेर जिज्ञासा राखेकी छिन् । हेर्नुहोस भिडियो...
प्रसिद्ध लेखकको एउटा भाइरल कथा: ‘पुरुषसँग मेरो पहिलो रात’
१९ फाल्गुन २०७२, बुधबार १८:०४	0 2,360
रुद्रले एक हातले मेरो ब्लाउजको टाँक खोल्यो । उसको ओसिलो जिब्रो मेरो छातीमा चलमलाउन थाल्यो । अस्तव्यस्त साडीमा अल्भिएर म उसको अँगालोमा निस्सासिरहेँ । ‘हेर केटी, आफ्नो लोग्नेले भनेअनुसार गर । खुट्टा फाडेर राख । यही नै त हो तरिका !’ मैले आफूलाई बारम्बार यसो भनिरहेँ । त्यसपछि मैले पूरै शरीर छाडिदिएँ । आँखा चिम्लँदै म आफू त्यहाँ नभएको परिकल्पना गरेँ । ‘यो मेरो शरीर होइन । यहाँ जे-जस्तोे अश्लील काम भइरहेको छ, त्यसमा म पटक्कै संलग्न छैन । यो म होइन । यो अरू कसैको शरीर हो,’ म यस्तै-यस्तै सोचिरहेकी थिएँ । त्यसपछि रुद्र ममाथि उक्लियो । अब मेरो आँखामात्रै होइन, सासै बन्द भयो । तैपनि, यसलाई मैले आफ्नै लोग्नेले गरेको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेर चित्त बुझाउन खोजेँ । तर, मेरो यो मनचिन्ते विचारको प्रक्रियालाई तोडेर घाँटीबाट चिच्चाहट निस्कियो । रुद्रले दुवै हातले मेरो मुख बन्द गरिदियो । मलाई असहय पीडा भयो । रातभर रुद्रले हरेक तरिका अपनायो । सामान्य रूपमा अपनाइने सबै विधि अपनायो, तर हरेकपटक रातलाई चिर्दै ऐआ…..
यस्तो हुन्छ कपिलको नयाँ कमेडी शो (हेर्नुहोस् प्रोमो)
१९ फाल्गुन २०७२, बुधबार १७:०७	0 317
कमेडी नायक कपिल शर्माको 'कमेडी नाइट विथ कपिल' बन्द भएसंगै निराश बनेका दर्शकहरुका लागि खुसीको खबर छ । नेपालमा समेत लोकप्रिय यो कार्यक्रम स्थगित गरिएपछि अब कपिलको नयाँ कार्यक्रम कस्तो आउला वा नआउला भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा भैरहदा उनको नयाँ कमेडी शोको प्रोमो सार्वजनिक भएको छ । अचम्म त के छ भने उनको मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रोमो शो नै एकैदिनमा साढे तीन लाख भन्दा बढी भिजिट बहेका छन् । हेर्नुस कस्तो आउदैछ कपिलको नया कमेडी शो
सही समयमा खिचिएका ३० रोचक फोटो जुन देख्ने बितिक्कै हाँसोको फोहोरा छुट्छ
१९ फाल्गुन २०७२, बुधबार ११:५७	0 3,427
फोटोको ब्याख्या गर्न सायदै सम्भब होला । किनकी फोटोग्राफी र यिनको बिशेषता बारे अनेक किसिमले ब्याख्या गर्न सकिन्छ । एउटा फोटोले हजारौ शब्द बोलिरहेको हुन्छ । यो ध्रुबसत्य भै हाल्यो । तर कतिपय फोटोहरु यस्तो हुन्छ जुन देख्ने बितिक्कै त्यसले अर्थ दिने मात्रै होइन सदैब यादगार बनाइ दिन्छ । फोटो देख्ने बितिक्कै हाँसो उठ्ने मात्रै होइन त्यो फोटो याद आउने बितिक्कै पनि हाँसोको फोहोरा छुट्छ । हेर्नुहोस् यी रोचक ३० फोटो जुन देख्ने बितिक्कै तपाईले हाँसो थाम्न सक्नु हुन्न ।
१८ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १६:१८	0 1,608
भारतको रिंगिंग बेल्स कम्पनीले ल्याउन लागेको फ्रिडम २५१ स्मार्टफोन बिश्वकै सस्तो स्मार्टफोन हो । दुनियालाई चकित पार्दै ल्याउन लागेको २५१ रुपैयाको एउटा फोनले सिंगो भारत हल्लाई रहेको छ । फोन अर्डर गर्नेहरुको भिडले कम्पनीको वेबसाइट नै क्र्यास हुनु, आन्तरिक राजस्वले छापा मार्नु लगायतका कारण यो कम्पनी विवादास्पद चर्चामा छन् । यति मात्रै होइन २५१ रुपैयाको फोन बेच्ने भारत ठूल्ठूला मिडियामा करोडौका बिज्ञापन प्रकाशन/प्रशारण गरिएका छन् । यो फोनले गर्दा अहिले भारतीय बजारमा अनेक टिक्का टिप्पणी भैरहेका छन् । आखिर कसरी यति सस्तो मूल्यमा फोन ल्याउन सक्यो भन्ने बिषयमा अनेक आरोप प्रत्यारोप भैरहेका छन । २५१ रुपैयामा स्मार्टफोन उपलब्ध गराउदा नै चकित परेकाहरु अहिले झन थप अचम्मित भएका छन् । किनकी २५१ रुपैयामा फोन बिक्रि गर्दा पनि ३१ रुपैया नाफा हुन्छ भन्छन कम्पनीका निर्देशक मोहित गोयल । उनको यो भनाईले थप आश्चर्यमा पारेका छन् । तर उनले त्यसै भनेका छैनन्, यसका पछाडी उनको बिजनेश टेक्निक पनि उतिक्कै दमदार देखिन्छ । पढ्नुहोस् ३ कारण
१५ बर्षीय बुबाको ५ बर्षीय छोरा !
१८ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १३:२१	0 520
नेपाल जस्तो पूर्वीय समाजमा समेत अहिले बालबिबाह बन्देज छ । 'बिहावारी २० बर्ष पारी' भन्ने भनाई नै छ । भने पश्चिमा मुलुकमा बालबिबाह निकै कडाइ छ । यस्तो अबस्थामा १५ बर्षीय व्यक्तिको ५ बर्षीय छोरा कसरी सम्भब भयो होला ? यो कुनै कागजी मिस्टेक पनि होइन न त लुकिछिपी गरिएको बिबाह नै । अझ बिडम्बना त के छ भने उनीहरुको फोटो हेर्दा उमेर निकै घर्कीसकेको देखिन्छ । न त बुबाको उमेर १५ बर्ष जस्तो देखिन्छ न त छोरा नै ५ बर्ष जस्तो देखिन्छ तर भै दियो यस्तै । अहिले बुबाले १५ औ बर्थ डे मनाएका छन् भने छोराले ५ औ बर्थ डे मनाएका छन् । खास कुरा के हो त ? पढ्नुहोस....
बिश्वास नै गर्न नसकिने अनौठो तर ध्रुबसत्य १० रोचक तथ्य
१८ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १२:३०	0 1,832
कतिपय कुराहरु यस्ता हुन्छन जुन आफ्नै आँखाले देखे पनि बिश्वास गर्न सकिन्न । भनेपछि बर्षौ पुरानो कुरालाई यथार्थ हो भनेर पत्याउन गार्है पर्ला तर सत्य सधै सत्य नै हुन्छन । न काटेर झुठ बनाउन मिल्छ न त नपत्याएर सुख नै पाउछ । हो, हामीले यहा त्यस्तो ९ ध्रुबसत्य कुराहरु प्रस्तुत गरेका छौ जुन झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर बिश्वास नगरी साध्य छैन । किनकी यो यति धेरै महत्वपूर्ण छ जुन बिश्वका सुप्रसिद्ध व्यक्ति र घटनासँग सम्बन्धित छ तसर्थ पनि तपाईले थाहा पाई राख्न जरुरी छ । पढ्नुहोस बिश्वास नै गर्न नसकिने तर ध्रुबसत्य ९ कुरा
१७ फाल्गुन २०७२, सोमबार १५:१३	0 508
हलिउडमा बहुचर्चित ‘टाईटानिक’ हिरो लियोनार्दो डि क्याप्रियोले पहिलो पटक अस्कर अवार्ड जितेका छन् । अमेरिकाको लसएन्जलसमा जारी ८८ औं ओस्कार पुरस्कार वितरण समारोहमा लियोनार्दोलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । लियोनार्दो हलिउडमै सर्वाधिक पटक अस्करका लागि नोमिनेसनमा पर्ने अभिनेता हुन् । लियोनार्दोले ६ पटक सम्म नोमिनेसनमा परे पनि पहिलो पटक अस्कर अवार्ड हात हरेका पारेका हुन् । अस्कर प्राप्त गरेपछि उनले दिएको भाषण इन्टरनेटमा भाइरल बनेको छ । संसारभरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरुमा लियोनार्दोका तस्विर सहित उनको भाषण शेयर गरिएको छ । हेर्नुहोस भिडियो...
१७ फाल्गुन २०७२, सोमबार १३:०७	0 7,214
कोमलताका प्रतिक अनि प्रेमका सारथी हुन् महिला । त्यसो त केटी/युवती/महिला/गर्लफ्रेन्ड/प्रेमिका इत्यादि भन्ने बितिक्कै पुरुषहरुको मन एकत्रित भैहाल्छ । 'महिला' नाममै एउटा यस्तो अचुक गुण छ जुन पुरषसंग कदापी हुन् सक्दैन । र त महिला भन्ने बितिक्कै जस्तोसुकै पुरुष पनि मरिहत्ते गर्छन र महिलाका पछि लाग्छन । अझ मन परेकी युवती पाएनन् भने कतिपयले ज्यान नै फालिदिन्छन । महिलाको एक बोलीले पनि पुरुषको दिमाग छताछुल्ल बनाई दिन्छ । जस्तोसुकै कठोर मनलाई पनि पगाली दिन्छ, जतिसुकै पीडादायी क्षणमा पनि सुखानुभूति गराई दिन्छ । पुरुषहरु महिला भन्ने बितिक्कै निकै चियो चासो गर्छन । अनि सोच्छन 'केटीहरु एक्लै हुँदा के के गर्दो रहेछ ?' यो धेरैको मनमा लाग्ने जिज्ञासा हो । आज हामी तपाईको यही जिज्ञासा मेटाउने कोसिसमा छौ । पढ्नुहोस फोटोफिचर र भिडियोसहितको सामग्री...
महोत्सव हेरेर रमाउन आएका आमाहरु धरधरी रोएपछि….
१७ फाल्गुन २०७२, सोमबार ११:५२	0 538
मेला र महोत्सब रमाइलोका पर्याय हुन् । केही नया कुरा थाहा पाउन र रमाइलो गर्नका लागि मेला/महोत्सबमा सहभागी भइन्छ । तर मेला भर्न आएका बृद्ध आमा बुबाहरु गहभरी आँसु झार्दै रोएपछि कसको मन थाम्न सकिएला र ? त्यो पनि एक दुइ जना होइन महोत्सब हेरिरहेका अधिकांश आमाहरुको आँखाबाट आँसु झर्यो । हो, कोहलपुर महोत्सबमा यस्तै भयो । मेला हेर्न आएका आमाहरु आफ्नो अतित र यथार्थलाई सम्झेर धरधरी रोए । कसै गरेर पनि उनीहरुले आँसु थाम्न/लुकाउन सकेनन । रमाइलो हेर्न आएका आमाहरु आखिर किन बिरक्तिएर धरधरी रुन बाध्य भए ? आमाहरु रोएपछि त्यहाको माहोल कस्तो भयो ? हेर्नुहोस् फोटो फिचर र भिडियो
१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार ११:०४	0 2,362
अर्चना पनेरु, गत केही महिना देखी नेपालमा चचामा छिन् यिनी। यिनी चर्चामा आउनुको कारण चाहिँ अलिक बेग्लै छ। पोर्नस्टार बन्छु बन्ने लक्ष छ भनेर सुरुमा आफ्नो अर्धनग्न तस्विरहरु फेसबुकमा अपलोड गरेकी यिनलाई सामाजिक सञ्जाल साथै मिडियाले दिएको रेस्पोन्सले हौस्याएपछि पुरै नग्न भएर यिनले फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न थालिन। यतिखेर विभिन्न पोर्नसाइट देखी फेसबुक पेजमा यिनका पोर्नस्टार शैलीका भिडियोहरु छयापछ्याप्ती भएका छन्। अर्चनाले नांगो फोटो फेसबुकमा अपलोड गरेपछि उनलाई स्कुलले त निकालिदिइसकेको छ भने उनको छरछिमेकीले पनि आफ्ना सन्तान ब्रि्रने भनेर उनलाई सामाजिक बहिस्कार नै गरिसकेका छन्। करिब १७ वर्ष उमेरकी एउटी किशोरीले पोर्न जस्तो क्षेत्रमा लाग्ने भन्दै गरेको यो सबै हर्कत नाजायज र गैरकानुनी छ।
१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार ११:०१	0 716
१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार १०:२२	0 5,143
१५ फाल्गुन २०७२, शनिबार १३:२२	0 1,845
बिश्वमा अनेक प्रकारका घर तथा अपार्टमेन्टहरु छन् । पर्यटकलाई आकर्षणका लागि होस् अथवा बस्नकै लागि किन नहोस । मान्छेहरु सकभर बलियो र आकर्षक घर बनाउने गर्छन । घरको डिजाइनदेखि बास्तुमा समेत ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्छन । तर यहाँ हामी एउटा यस्तो घरको कुरा गर्दै छौ जुन बिल्कुलै अनौठो खालको छ । अहिले विश्वका पर्यटकहरुका लागि यो घर आकर्षणको केन्द्र बनेको छ जुन घरको हरेक सामग्री उल्टो छ । छाना, भर्याङ् देखि त्यहा भित्र राखिएका टेबल कुर्सी र खानेकुरा समेत उल्टो राखिएको छ । अहिले बिश्वभरका मिडियामा यो घरको समाचार, तस्बिर र भिडियो भाइरल बनिरहेको छ । यी ११ फोटोमा हेर्नुहोस् उल्टो घर भित्रको बिचित्र संसार
१४ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १४:५७	0 4,930
निरो, नेपाली राजनीतिक आन्दोलन र दमनको सिलसिला चलेको समयमा हमेशा नेपाली राजनीतिज्ञ र पत्रकारले प्रयोग गर्ने नाम हो यो । रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाएको प्रसंग राजा ज्ञानेन्द्रदेखी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्म जोडिएको आएको छ । यद्यपी २० हजार भन्दा बढीको हत्याको कारक बनेका प्रचण्ड र बाबुरामलाई तुलना गर्ने इतिहासका पात्र नेपाली मिडियालाई मिलेको देखिँदैन । तर मानव इतिहास निक्कै क्रुर शासकहरुको शासनकाल कटेर आएको छ । यहाँ शासन टिकाउन र सत्तामा टिकिरहन क्रुर र अमानविय शैली अपनाएका १० शासकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।